Ọrụ Onwe na Nchọpụta Nchọpụta | Martech Zone
Otu ụzọ isi melite njigide ndị ahịa yana afọ ojuju ndị ahịa ọ bụla bụ imepụta ọdịnaya nke na-enyere ndị ahịa aka inyere onwe ha aka. Ọbụghị naanị na enwere mmụba na afọ ojuju ndị ahịa, enwere ọnụọgụ ego-metụtara ndị ahịa anaghị ekekọta usoro ọrụ ndị ahịa gị. Kwusa ihe ọmụma gị, ajụjụ a na-ajụkarị, snippets na ihe atụ ebe ntanetị nwere ike ịchọta ha na-eme ka nke a kwe omume - na-etinye ha n'azụ nbanye maka ụjọ nke ndị asọmpi ịchọta ha.
Nnyocha ndị a na-adịbeghị anya na-agwa anyị na ọtụtụ ndị ahịa na-ahọrọ ọrụ onwe onye karịa ịkpọtụrụ onye na-akwado ha; na dị ka ihe ọmụma dị n'okpuru na-egosi, onye na-akụ 91% na-ekwu na ha ga-eji isi ihe ọmụma ma ọ bụrụ na o mezuru mkpa ha. Nke a bụ nnukwu ozi ọma maka azụmaahịa; ọrụ onwe onye bụ ụzọ kachasị ọsọ ma dị oke ọnụ ahịa maka nkwado ndị ahịa. Mmezi Infographic nke Zendesk na Chọọ maka Onwe Gị Onye Nwere ọgụgụ isi
Tags: obi ụtọ ndị ahịaNdị ọrụ nlekọta ndị ahịaAjụjụịrụ ọrụ onwe
Nov 12, 2012 na 3:23 PM
Nke a bụ ihe ọchị! Reactionsfọdụ mmeghachi omume ngwa ngwa site n'aka onye na-eme njikwa ihe ọmụma na ọrụ onwe onye maka ndụ:
1. Ọ dị ntakịrị ihe ijuanya na e hotara Oracle na ngalaba gbasara SEO yana ịkekọrịta ọdịnaya gị site na ntanetị ọchụchọ weebụ, ebe ha bụ ihe atụ pụtara ama nke ụlọ ọrụ B2B nke na-adịghị Ekekọrịta ihe ọmụma ntọala site na Google et al. Maka mma ma ọ bụ njọ, ha na-ekpochi ọdịnaya KB ha n'azụ nbanye ha
2. My data dị, nnọọ iche - ukwuu ala - karịa “40% ga-akpọ a kpọtụrụ center mgbe ọrụ onwe.” Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ahụmịhe B2C gị na Amazon, Microsoft, wdg, ị nwere ike ịhụ na nke a bụ iwu ịdị oke elu. Mana ọbụlagodi na gburugburu B2B, olu dị na weebụsaịtị bụ 10x - 30x olu na ebe nkwado, ma ọ bụ karịa.
3. Echere m na Gartner ezighị ezi gbasara ndị ọrụ mebere. (70% puru omume) 🙂
Nov 12, 2012 na 4:17 PM
Mgbe Penguin & Panda mmelite ọdịnaya bụ eze. Mbipụta ihe omuma gị ga - eme ka SEO gị nwee ike